Brody PR: Mgbe ị ga-agbanye ụlọ ọrụ mmekọrịta gị | Martech Zone
Taa, ya na narị ole na ole ndị ọzọ na-ede blọgụ, ndị nta akụkọ na ndị isi ụlọ ọrụ, enwetara m ozi email na-achọghị site na Bet Brody (beth@brodypr.com) na ntinye aka na ya banyere Jump Start Social Media Publishing a New E-Book on Social Media Marketing For Small Business.
Ọ dịghị njọ na ọ bụ SPAM, ọ na-enyekwa ndepụta nke ndị nnata na aha onye ọ bụla na adreesị ozi-e. Mgbe nụrụ Bcc?
Amaghị m Betani amaghịkwa m Brody PR, ma aga m eme ka ha mara, yana atụmanya ha niile na ndị ahịa ha, na ha kwesịrị nnabata azu ahụ ha na-enweta ugbu a. Otu nzaghachi (zaghachi niile) na oke ozi email (nke na-aga n'ihu) site na ụlọ ọrụ ama ama ama ama agụpụtara:
Wepu m na ndeputa a nke m na-achoghi ka m gaa ma ghara iwepu ya.
Ndepụta nke ndị mmadụ a gakwuuru bụ onye bu onye nke ndị na-eme ihe ike. Ezie na m flattered na m mere na Ndepụta, ọ na-ewe m iwe na ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze ga-achịkọta ndepụta dị ka nke a iji zigara anyị ozi. Eji m n'aka na Jump Start Social Media E-Book dị ezigbo mma e-akwụkwọ… mana agaghị m ebudata ya, jikọta ya, ma ọ bụ kwado ya n'ihi na ụlọ ọrụ PR na-atụ m ụjọ.
Relationslọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze, karịa onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ahụ, kwesịrị ịghọta mmetụta nke ozi ịntanetị a na-achọghị na mkpa ọ dị nkwukọrịta dabere na ụwa a nke spam. Enwere m ụdị kọntaktị na saịtị m ka ndị m nwee ike ịdọrọ m ahịrị - nke ahụ bụ ụzọ dị mma maka ụlọ ọrụ PR iji jikọọ m… ma ọ bụ site na ndị ọzọ na-ajụ mmadụ iri asatọ m na-ekwurịta okwu. Nke a bụ naanị umengwụ PR, dị ọcha ma dịkwa mfe.
Ugbu a adreesị ozi-e m dị n'aka Chineke maara-onye n'ihi na otu ụlọ ọrụ PR chefuru iwu niile nke Mmekọrịta ọhaneze. Na ụdị, A bipụtara m email ha ugbu a ka ụwa niile hụ. Enwere ike ịhapụ Bet dee mgbe ị nwere nkwalite gị ọzọ - Ama m na ha ga-ahụ ya n'anya!
A ga-agbakwunye Brody na ndepụta ogologo nke Ndị na-akpọ Sp by Gina Trapani. Ọ na - eme m ka m chee ma Brody enwere ike ịnagide ikpe ikpe klas maka imebi iwu CAN-SPAM ebe ọ bụ na ha enyeghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi pụọ na nkwukọrịta mgbasa ozi.
Oge ọzọ ị ga - ewe ụlọ ọrụ PR, chọpụta otu ha ga - esi chọta ndị ahịa na ahịa yana otu ha ga - esi jekwuru ha. Ọ bụrụ na ọ dịka Brody PR, egbula ha ego. Ha enwetaghị ya. Y’oburu n’inwe ike dika Brody PR nke n’akpali spam, gbaa ha oku. Ha ga-emebi ihe karịa mma maka akara gị.
Mgbakwunye Ọgụgụ: Otu otu email si gbuo ụlọ ọrụ PR, Ọ ga-amasị m ịrịọ mgbaghara, Mmekọrịta ọhaneze dara: Ihe nkuzi na nkụja… Eji m n'aka na ndị ọzọ na-abịa…
MGBE: 8/21/2009 Rec'd dị ezigbo mma site na Bet Brody taa na-arịọ mgbaghara maka snafu, Bet nwere isiokwu 'nkuzi mụtara' na-abịa n'oge adịghị anya.
MGBE Dị Mkpa: 10/19/2009 Chetara ndetu site na Brody PR ọzọ na anyị nwere njikọ anyị na-ezighi ezi na Post anyị! Anyị ji obi anyị niile arịọ mgbaghara ma emelitere njikọ ndị ahụ.
Tags: inyeNa Mgbasa ozi Mgbakwunyekernederede
Aug 20, 2009 na 12:17 PM
Akụkụ kachasị mma banyere Brody PR bụ na mgbe m pịrị gaa na webụsaịtị ha, ihe mbụ m hụrụ bụ isi okwu ha nke ji nganga na-ekwuwapụta "Otu ụlọ ọrụ nwere akọ na uche…"
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị Irony, mgbe ahụ amaghị m ihe bụ.
Aug 20, 2009 na 1:17 PM
Doug - ndị na-eme ụdị ihe ndị a nwere echiche dị egwu nke ịdị mkpa onwe ha. Lelee ndị ahịa ya anya; ọ masịghị gị? Agbanyeghị na ịbanyeghị, ihe ọ ga - agwa gị dị oke mkpa oge niile, yabụ amamịghe na ọ doro gị anya na ị ga - enwe ekele maka na o jiri email ya mee gị amara.
Na-elekọta mmadụ mgbasa ozi dị nnọọ adịghị enweta ya mgbe ọ na-abịa mkpa n'ezie.
Aug 20, 2009 na 1:42 PM
Daalụ maka biputere nke a, Doug. Ha bụ mmekọrịta ọha na eze, mgbe ahụ enwere mmekọrịta mgbasa ozi, mgbe ahụ ha kwesịrị ịbụ mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze (nche anwụ nke ndị na-eme ihe kwesịrị ịdaba). Na ijikọta atọ ndị a n'otu okwu bụ ọdịda na-agbanwe agbanwe na ụlọ ọrụ niile, yana ihe akaebe dị mma na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enweta ya.
Aug 20, 2009 na 2:38 PM
Ọ dị ezigbo mma n'ụzọ ị si daa na i chere na ị nwere mmetụta n'ebe ahụ na akara mbụ
Aug 20, 2009 na 5:59 PM
Brody PR #okporo
Aug 20, 2009 na 6:15 PM
wow - ee nke a bụ nnukwu f-ma ọ gwụla ma nke a bụ njehie na-aga n'ihu n'akụkụ ha, ị kwesịrị inye uru nke obi abụọ. Ndị mmadụ nwere ụbọchị ọjọọ ma na-emehie mgbe ụfọdụ. Gịnị ma ọ bụrụ na mmadụ akpọọ maka isi gị ma were otu ìgwè ndị na-eme ihe ike na-achụ gị n'azụ oge ọ bụla ị mehiere na otu ụbọchị? Nke a nwere ike ịbụ na ọ ga-abụrịrị ihe dị mkpa na-enweghị ịkwa emo ụlọ ọrụ na onye mgbasa ozi na ajụjụ. N'ụzọ doro anya, ị ga-enwerịrị ụbọchị ọjọọ gị onwe gị iji bụrụ onye iwe na ọgụ a.
Aug 21, 2009 na 2:56 PM
Ekwetaghị m. N'eziokwu, echere m na post a siri ike n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. O doro anya na nwanyị ahụ maara BCC. O mehiere ihe. Usoro CC na BCC dị nso na ibe ha.
I kwenyere na ị maghị Bet Brody ma ọ bụ Brody PR. Iga ekwu ihe ndia ikwuru na post a na iru ya. You ga - agwa onye ahịa ya n’ihu ya ka ha chụọ ya n’ọrụ n’ihi na o mehiere ihe n’itinyeghị ndị mmadụ na BCC? Amaghị m gị, yabụ na amaghị m azịza ajụjụ a, mana achọrọ m ịma.
Nke a bụ FAR si spam kachasị njọ. Nweta ezigbo spam?
Nwanyị a mere ihe n'eziokwu na mmeghachi omume ezighi ezi. Onye obula zara, tinyere okwu nke i jiri, mara ihe ha na eme. Ha bu ndi na-aghagha onye obula, ama. Ejim n'aka na nke a abughi oge mbu ihe a mere. Achọrọ m ịmata echiche gị na edemede m dere maka mpempe akwụkwọ a:
Social media "gurus" na ndị na-ede blọgụ bụ okwu efu
Ọzọkwa, ọ bụrụ n'ịchọrọ ezigbo akụkọ ọdịda PR, gụọ nke a. Ọ bụ parter abụọ ebe onye ahịa ahụ na-abata na njedebe kpamkpam na njedebe.
Hey PR, ndị na-ede blọgụ abụghị ngwaọrụ a ga-eji
Mmelite: Akụkọ ọjọọ PR akụkọ na-adịghị mma. Onye ahịa nke ụlọ ọrụ PR bụ obtuse.
Aug 21, 2009 na 4:59 PM
1. Abughi m usoro nke ihe egwu a, dspark. M na-emeghachi omume na ya.
2. Nke a bụ PUBLIC RELATIONS firm. Nke a bụ ọrụ ha na, ma eleghị anya, na ha bụ ọkachamara. ọ dịka ịjụ ma ọ bụrụ na onye ọrịa egbuola ụkwụ ya na mberede ekwesighi iwe iwe na Dọkịta.
3. Ọ bụ unsolicited azụmahịa email na NO nwepu aha.
4. Ha jiri nzuzo rụpụta ndepụta adreesị email a na-enweghị ndị nnata maara.
Nke a abụghị emezighị emezi n'eziokwu - ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa iji tinye ndepụta a ma ha nwere ndị ahịa ha na-akwụ ụgwọ maka ọrụ a. Nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụ ihe megidere - ma ihe ọjọọ ma aghụghọ.
Aug 22, 2009 na 11:44 PM
Ọ ga-enwerịrị ike na gị ka ị ghara imejọ ọ bụla, Douglas. Ana m aja gị mma maka nke ahụ, ka ị ghara inwe ihie ụzọ ịghara ihie ụzọ na PR.
M na David na nke a. N'ime elu na enweghị isi, mana ị ga-enwerịrị mkpa ọ dị ịga n'ihu karịa posts ndị ọzọ.
Aug 23, 2009 na 4:46 PM
Akananam ndọhọke ke ami nnamke ndudue. Mgbe m mejọrọ, ezutere m mmetụta. Ọ bụrụ na anyị enwetaghị mmetụta, anyị agaghị ama na ọ bụ mmeghe, ka anyị ga-ama? M na-akpọtụrụ Nwada Brody, eziterela m ebook m na Blogging Business, ma nye ya aka iji kwado ihe ọ bụla ọ chọrọ.
N'ezie i mere. Ọchịchị niile.
Aug 21, 2009 na 9:20 PM
Amaghị m maka Doug, mana m ga-agwa Nwada Brody ihe ndị yiri ya ma ọ bụrụ na enwere m ohere.
Echere m na ọ dị njọ karịa spam na-agbaso. Ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze abụghị ndị mgbasa ozi. Ha kwesiri ịbụ ndị aka ochie n’ịkọwapụta okwu maara ụdị ozi ga-adị ndị na-ege ntị ụtọ na ụzọ aghụghọ ga-ewe ha iwe. Ọ bụrụ na onye ọ bụla kwesịrị ịma ka ị ga - esi hụ na ozi na - apụ apụ, ọ bụ ụlọ ọrụ PR.
Aug 23, 2009 na 4:47 PM
Enwere m ohere. Bet Brody kpọtụrụ m site na email wee jụọ m ikike iji kwupụta blọọgụ m na blọọgụ ọhụrụ ya, Ihe Mmụta Amụtara. Achọrọ m ịrịọ mgbaghara - ma nata ya. Echere m na Nwada Brody ga-agbake site na nke a… obi abụọ adịghị ya.
Aug 21, 2009 na 7:55 PM
Echeburu m na ọ dịghị onye maara ihe BCC bụ. Agbanwewo m uche m. A na m enweta akụkọ na PR na-ewepụta ụbọchị niile na (oge ụfọdụ) ọtụtụ narị adreesị ozi-e na TO: ubi (ugboro ugboro aha na ozi ịntanetị nke onye ọ bụla mgbasa ozi na steeti Indiana site na redio gaa na TV iji bipụta, ọtụtụ n'ime ha ejiri n'aka na ha achọghị ka adreesị ozi-e ha n'ihu ọha gafere, na-ekwughi na m kwenyere na nke a megidere iwu gọọmentị, ọ bụghị ya?)
Echere m na ọ bụ ebumnuche na ịkpachapụ anya na mbọ iji mee ka ndị nnata mara WHO natara e-mail ahụ. Nke mbu, o na-eweli ikike nke onye zitere ya site n’igosi otutu ndi mmadu ihe ekwuru banyere ikike ha. Ọzọkwa site n'ime nke a, ọ na-etinye ntakịrị aghụghọ (ma ọ bụ ikekwe B NOTGH so aghụghọ) onye nnata iji ihe ahụ. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ndị isi ike a niile natara ihe a ma nwee ike iji ya, ọ bụ na m ekwesịghị iji ya, kwa?
Isi okwu bụ nke a: ọ gwara gị ka ị kwuo maka ya, ọ bụghị ya? Na-eche mmadụ ole gụrụ blog gị wee pịa site na njikọ ndị enyere? Kedu ihe ochie ndọrọ ndọrọ ọchịchị? "Mgbasa ozi ọjọọ dị mma karịa na - enweghịzi aha m." I were ihe idide azụ, eriri nko na sinker. Na n'echiche ahụ, ọ rụrụ ọrụ ya n'ezie.
Aug 24, 2009 na 12:46 PM
Nke ahụ bụ ihe na-akpali take… ma anyị na-ekwu okwu banyere Brody, ọ bụghị ndị ahịa. Nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu!
Aug 21, 2009 na 9:12 PM
Nzaghachi anyị na nke a bụ: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
Aug 25, 2009 na 8:39 PM
Ghara BCC bụ nsogbu ATD siri ike, mana na PR, ị ga-ezipụ nkwupute mgbasa ozi na kọntaktị mgbasa ozi na oke - ọ bụ naanị ụzọ ị ga - esi mee ya nye onye ọ bụla dị mkpa mgbe ọ ka na - ede akụkọ. Aghọtara m iwe gị na ịme ka adreesị ozi-e gị bụrụ ọha na eze - na ị bụ onye ziri ezi inwe mmetụta otu a - mana, dị ka onye na-ede blọgụ, ọ bụ na ị gaghị ama karịa gbasara akụkọ akụkọ mgbe ha mere, ma dị ọhụụ ma dị ọhụrụ, karịa ichere ajuju?
Amaghị m ihe ọ dị na steeti, mana ebe a na England ndị nta akụkọ debanyere aha na ọdụ data nke mgbasa ozi ka e wee zigara ha ihe dị ha mkpa site n'aka ndị ha na-agaraghị enwe. Kedu ihe dị njọ na nke ahụ?
Aug 25, 2009 na 8:45 PM
Na mgbakwunye, nke a nwere ike ịbụ ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eto eto na-arụ ọrụ, onye bidoro na PR ma mehie ihe. I mebiela ya kpamkpam. Gini mere iji buru onye obi ojoo? Ma ọ dịkarịa ala, mmeghe ya enweghị isi.
Ha ekwesighi iji ọnwa gbakọta ndepụta - ị nwere ike ịga Media Atlas, Vocus, Cision ma ọ bụ ọnụọgụ data data ndị ọzọ ma depụta ndepụta nke ndị nta akụkọ, ndị na - ede blọgụ, ndị editọ, ndị na - emepụta ihe. M zigara ndị 227 ụnyaahụ ụnyaahụ, taa m na-akpọ ha niile ka ha mara ma ha chọrọ iji ya. Enweela m ọtụtụ ajụjụ ọnụ na mkpuchi maka onye ahịa m. Nke ahụ ọ dị njọ? Mba. Ọ bụ naanị etu ihe si arụ ọrụ - ha maara ya, amaara m ya, ọ dịghị onye na-akwa ụta maka ya.
Aug 25, 2009 na 9:54 PM
PRMira, Ihe ha mere, na ihe ị na-eme, bụ iwu na-akwadoghị na United States. Kwesịrị ịnye usoro nwepu aha, ma ọ bụghị na ị na-emebi iwu CAN-SPAM. You ghọtara na ị na-etinye ụlọ ọrụ gị n'ihe ize ndụ? Tinye nbanye n na saiti gi ma nakọta adreesị ozi-e n'uzo kwesiri - site na ikike ndi mmadu.
Anaghị m etinye ụlọ ọrụ m n’ihe egwu, n’ihi na ndị ntaakụkọ nwere ekele maka izipu ozi nke metụtara ha na kwa ụbọchị. Nke a bụ otú PR si arụ ọrụ na ọtụtụ ndị nwere obi ụtọ na ntọala ahụ, ndị mmadụ na-enweta nkwupụta mgbasa ozi gụnyere. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike izigara ya onye ọ na-enweghị nsogbu, wee gwa gị, rịọ mgbaghara ma ọ dịghị onye na-ede akụkọ ọjọọ banyere ya.
O doro anya na amaghị m gbasara iwu na States, mana dịka Vocus, Cision, wdg, na-arụ ọrụ n'ụwa niile (echere m na ha nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ ndị America), enweghị m ike iche na ọ dị iche. Echere m n'ezie na ị na-eke mmiri ozuzo na nkuzi. Ọ dịghị ka ọ zitere gị ozi email banyere amụba amụba ma ọ bụ jụọ maka nkọwa ụlọ akụ gị - nke a bụ ezigbo mpempe akwụkwọ PR, nke, n'ụzọ doro anya, ọ dị ntakịrị ka ọ kwụsị site na ịghara ịga BCC, mana nke ahụ bụ ogo ya. Enweghị mkpa maka iwebiga iwe ókè.
Aug 28, 2009 na 2:30 PM
Aug 28, 2009 na 11:09 PM
"Nke a bụ otu PR si arụ ọrụ" abụghị eziokwu. Enwere m mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ PR ma ha anaghị agbakọta adreesị ozi-e nke ndị na-eme ihe n'ahịa na-enweghị ikike ha wee zigharịa ha. Aga m akwado gị ka ị chegharịa usoro gị. Nwere ike na-enweta nsonaazụ maka ndị ahịa gị, mana I nwere ike inweta nsonaazụ kacha mma site na ịmebe mmekọrịta dabere na ikike ka ukwuu.
Aga m akwado ka ị gụkwa iwu UK na SPAM, "A ka nwere ike ịbịakwute ụlọ ọrụ 'oyi' na ọkwa email mana n'oge ndị a, ozi ịntanetị ga-enwerịrị nkebi ahịrị ọpụpụ."